Inkxaso kunye neNkonzo-Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.
CNC Wood kumzila
CNC Wood Ivula Lathe Machine
Metal Umngundo Machine
Ifayibha / i-Plasma Metal Cutting Machine
Amalaphu e-Oscilating / Umatshini wokusika wesikhumba
Laser mfanekiso Machine
Iintsimbi, izixhobo kunye nezixhobo
Inkxaso kunye neNkonzo
ATC Wooden Door zefanitshala Iikhabhathi Woodworking nangokukrola Machine
1.inkonzo ngaphambi kwentengiso: ukuthengisa kwethu kuya kunxibelelana nawe ukuze wazi iimfuno zakho malunga neenkcukacha ze-cnc kunye nohlobo luni lomsebenzi oya kuwenza, emva koko siza kukunika esona sisombululo sisiso. Ukuze iqinisekise umthengi ngamnye ukuba afumane umatshini wabo ofunekayo.
Inkonzo ye-2 ngexesha lokuvelisa: siya kuthumela iifoto ngexesha lokuvelisa, ukuze abathengi bazi ezinye iinkcukacha malunga nomngcelele wokwenza oomatshini babo kwaye banike iingcebiso zabo.
3.inkonzo ngaphambi kokuhambisa: siya kuthatha iifoto kwaye siqinisekise kunye nabathengi inkcazo yeeodolo zabo ukunqanda impazamo yokwenza oomatshini abangalunganga.
Inkonzo emva kokuhambisa: siya kubhalela abathengi ngexesha lokuhamba komatshini, ke abathengi banokwenza amalungiselelo awoneleyo kumatshini.
5.nkonzo emva kokufika: siya kuqinisekisa kubathengi ukuba umatshini ukwimeko entle, kwaye ubone ukuba ngaba akukho nanye into ekhoyo engekhoyo.
6.inkonzo yokufundisa: kukho incwadana ethile kunye neevidiyo malunga nendlela yokusebenzisa umatshini. Ukuba abanye abathengi banemibuzo engaphaya malunga nayo, sinobuchwephesha bokunceda ukufaka kunye nokufundisa indlela yokusebenzisa ngeSkype, ukubiza, ividiyo, iposi okanye ulawulo lwerimothi, njl.
Inkonzo yewaranti: sinikezela ngewaranti yeenyanga ezili-12 kumatshini opheleleyo. Ukuba kukho nasiphi na isiphoso kumalungu omatshini ngaphakathi kwewaranti, siya kuyitshintsha simahla.
Inkonzo yexesha elide: sinethemba lokuba wonke umthengi unokusebenzisa umatshini wethu ngokulula kwaye onwabele ukuwusebenzisa. Ukuba abathengi banazo naziphi na iingxaki zomatshini kwiminyaka emi-3 okanye nangaphezulu, nceda unxibelelane nathi ngokukhululekileyo.
1. Yintoni Cnc laser umatshini
Ngomgaqo wokukhupha i-laser, Ifakelwe kwinkqubo yokuhambisa komatshini ukuze i-laser isebenze ngokufanelekileyo.
2. Zeziphi iintlobo zomatshini we-laser?
1) I-laser ye-CO2: I-laser yesiqhelo ye-Co2 / i-Mixed Co2 laser (i-Co2 laser yesinyithi kunye ne-nonmetal)
2) Ifayibha laser ukusika umatshini
3) Umatshini wokuMakisha: Umatshini wokuMakisha weFayibha yeLaser / Umatshini wokumakisha we-CO2
Uqwalaselo oluphambili lomatshini we-laser (izixhobo)
1 ityhubhu ye-laser (izinto ezinokusetyenziswa) + ukubonelelwa ngombane nge-2 inkqubo yokulawula eyi-3 itafile yokusebenza (itafile yemela, itafile yobusi) inkqubo yokuqhuba eyi-4: ibhanti, ibhola ejijwayo (oxutywe i-laser ye-CO2) iimoto ezi-5 kunye nokuqhuba (ngokufanayo nomatshini wokukrola) Isipili esinye esigxile ekubekweni kokukhanya okubomvu endaweni yesikhokelo sikaloliwe esi-8 (esiqhelekileyo: i-XY axis / cut cut: XYZ axis) + slider 9 OMRON limit switch
Ukhetho: itafile yokunyusa, impompo yamanzi (chiller), inkqubo ye-lubrication, fan yokukhupha, isiguquli somoya
4. Zithini iinkqubo ezine ezisemgangathweni zomatshini we-laser?
Umqhubi wokukhupha umlilo: Umsi uphonsa ngaphandle
Isiguquli somoya: ukusika okungumncedisi, ukukrola okungumncedisi, ukupompa kude inkunkuma
Chiller: Ukunciphisa ubushushu ityhubhu laser ukuqinisekisa umsebenzi ixesha elide
Indawo ebomvu: I-laser ayibonakali, ke sebenzisa i-emitter ebomvu ukumisela indawo ekuyo
5. Yintoni abavelisi befayibha lasers?
Ekhaya: URaycus I-UK: I-GSI, i-JK laser yinkxaso-mali
EJamani: IPG IUnited States: Ukukhanya
6. Ifayibha laser mgawuli amandla
300w, 500w, 750w, 1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w
7. ubukhulu ukusika obukhulu kunye isantya ukusika ifayibha laser mgawuli Ubuninzi ukusika ubukhulu
Yentsimbi ye-carbon ye-300w, i-3 yentsimbi engenasici, i-1.2
I-500W yeCarbon yentsimbi, 6 i-Stainless Steel ≤ 3
I-750w ikhabhoni yentsimbi ≤8 intsimbi engenasici ≤4
I-1000w yentsimbi yentsimbi, 10 intsimbi engenasici ≤ 6
2000w Carbon Steel bon20 Yenziwe ngentsimbi eshayinayo ≤8
8. I-CO2 laser ityhubhu yentsimbi
9. Yintoni amandla etyhubhu ye-laser ye-CO2?
Amandla aqhelekileyo ngu-40w, 60w, 80w, 100w, 130w, 150w, 180w, 280w
Eyona nto inkulu yile laser ityhubhu yamandla yile, ukujiya kokujija kukhulu, kwaye ubukhulu bamandla kukuba, xa usika izinto ezifanayo, kukhawuleza ukusika. Amandla amakhulu, imveliso ibiza kakhulu. Okukhona mkhulu amandla, kokukhona into ekroliweyo ibaxekileyo. Okukhona mkhulu amandla, kokukhona uzinzo lubi. I-60w lelona gunya lifanelekileyo lokukrola.
10. Ubomi benkonzo yetyhubhu yeLaser
Iiyure ezili-10 000
IJingliu Road, iSithili saseHuaiyin, iSixeko saseJinan, iShandong Provice, China.